Barcelona oo ciyaar la’aan ku qaadatey koobka Spanish Super Cup Video+Sawiro – SBC
Barcelona oo ciyaar la’aan ku qaadatey koobka Spanish Super Cup Video+Sawiro
Laba goo loo uu shabaqa Real Madrid ku habsadey laacibka aduunka Lionel Messi ayaa kooxda horyaalka Yurub waa Barcelona waxaa u suuragashay inay ku xaqiiqsadaan markii 10-aad koobka Spanish Super Cup.
Guusha Barcelona waxaa sidoo kale gool caaqibo leh u sadexeeyey xidiga khadka dhexe Iniesta kaasi oo kubad uu u soo baasay Messi xaga sare jaf uga dulqaaday goolhayaha kooxda Real Casillas.
Inkastoo Real Madrid ay si buuxda qaybtii hore ee ciyaarta si weyn u maamulaysay Barcelona hadana waxay heshay laba gool oo ay u kala saxiixeen Cristiano Ronaldo oo goolkii caawa uu dhaliyey uu noqonayo goolkiisii 100-aad ee uu u dhaliyo Real & weeraryahanka Benzema oo goolka Real u xaqiijiyey 10 daqiiqo ka hor waqtiga dhamaadka ciyaarta kaasi oo ciyaarta ka dhigay 2-2.
Real waxay xiligaasi isku diyaarisay inay wajahdo Barce waqti dheeri oo ciyaarta lagu daro laakiin waxaa taasi diiday Messi oo goolkii labaad ee quusinta ku hubsadey shabaqa Real taasi oo ciyaartii ka dhigtey 3-2 waxaana marka lagu daro goolishii gurigii hore ee Real lagu kala dhaliyay natiijadii ay noqotey 5-4 oo ay sidaasi ku guuleystey Barcelona.
Inkastoo ciyaar adag ay labada kooxood soo bandhigeen hadana waxaa ceeb iyo waji gabax waliba boog wajiga kaga taal ku noqotey ciyaaraha kubada cagta ee Spain xifaaltanka aadka u fool xun ee Real & Barce ka dhaxeeya kaasi oo gaaray in mar kale caawa ku dhawaad 100 kun oo taageerayaal ah oo garoonka ku sugnaa iyo malaayiin Tv-yada ka daawanaysay lagu hordagaalamo oo waliba la qaato kaarka cas & kan hurdiga.
Khalad u muuqdey ku tala gal oo daafaca Real Madrid Marcelo uu ku galay captain-kii hore ee kooxda Arsenal Cesc Febregas oo badal ciyaarta ku soo galay ayaa wuxuu keenay in fawdo iyo dagaal gacmaha la isula tagey oo ka dhaco garoonka dhexdiisa waxaana toos u qaatey kaarka cas ciyaaryahanka Marcelo, sidoo kale waxaa iyaguna kaarka cas loo taagey David Villa & Mesut Ozil kuwaasi oo afka & gacanta isula tagey.
Foolxumada & dagaalka u dhaxeeya Madrid & Barcelona ayaan loo hayn wax xal ah iyadoo ceeb aad u weyn u ku tahay kubada cagta Spain oo xiligan ah kubada sadexaad ee dunida laga xiiseeyo.
Waxyaabaha cajiibka ah ee caawa dhacay waxaa ka mid ahaa iyadoo Jose Mourinho mar uu u soo dhawaaday Lionel Messi uu sanka hawada ka raadsay isagoo ula jeeday cay ah in uu soo shiirayo ama qarmuun ka soo baxayo Mess daawo Video qosol leh.
(Jose Mourinho oo sanka ka qabsanaya Lionel Messi